ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ဝင်ငွေ နိုင်ငံအတွက် သုံးသင့်ပြီ | ဧရာဝတီ
ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့ ဝင်ငွေ နိုင်ငံအတွက် သုံးသင့်ပြီ
ဧရာဝတီ| July 11, 2012 | Hits:2,357
9 | | မြန်မာအစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ လျှော့ချပေးရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်လာနိုင်ရန် အတွက် အမေရိကန် အစိုးရ၏ လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်များသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးအတွက် ကောင်းမွန်သော အလားအလာဟု ယူဆပါသည်။
အမေရိကန် အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လုပ်လိုသည့် မည်သည့် ကုမ္ပဏီကို မဆို သဘောတူ စာချုပ်နှင့်တကွ ငွေကြေး စာရင်းဇယားများကို ပွင့်လင်းစွာ ရှင်းလင်းချပြရမည်ဟု ပြဌာန်းလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ယခင်စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူ ထိပ်တန်းစီးပွားရေး သမားများအပေါ် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားဦးမည် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်အစိုးရ အနေဖြင့် ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်ရန် အားပေးခဲ့ သော်လည်း တိုင်းပြည်၏ အဓိက ဝင်ငွေဖြစ်သော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကိုမူ ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။ ယခုမူ ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများတွင်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုက်လျောခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ စတိဗ်ဂရော့ဖ်က မြန်မာပြည် စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ရန် မကြာသေးမီ Bangkok Post သတင်းစာ ဆောင်းပါး ရေး၍ တိုက်တွန်းထားသည်။ ရေရှည်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရာရောက်မည့် ရေနံ၊ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့နှင့် တွင်းထွက် ပစ္စည်း တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေကို နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများတွင် ထိထိရောက်ရောက် ပြန်လည် အသုံးပြုရန် တင်ပြထားသည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ရေနံ၊ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်လာရန် ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်တွင် ကမ်းလွန်ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း ၂၅ ခုအထိ ရှိနေကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက်တွင် အထက်ပါအတိုင်း တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ယခင် နအဖ အစိုးရလက်ထက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည် ပြည်သူတရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ပိုင်သဖွယ် သဘောထားကာ စာရင်းဇယား တင်ပြခြင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သူ၏ ဥရောပခရီးစဉ် အတွင်း ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းပြောသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ညီလာခံတွင် မြန်မာပြည်၏ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် အများဆုံး တူးဖော်ရရှိနေသည့် တွင်းထွက် သယံဇာတ ပစ္စည်းများမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ် များကို ဒေသခံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်က အသုံးပြုခြင်း မရှိခဲ့၊ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဘဝ အခြေအနေများမှာ နိမ့်ကျဆဲပင် ရှိနေသေးသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
တိုင်းပြည်၏ မြေပေါ်မြေအောက် သဘာဝသယံဇာတများသည် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံး၏ ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်၊ ယင်းမှ ရရှိသည့် အကျိုးအမြတ်များသည် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ တရပ်လုံး၏ အကျိုးအတွက် ဖြစ်သင့်သည်။ ဖောင်စီးရင်းရေငတ် နေရသည့် အဖြစ်မှ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံး ကင်းဝေးစေရေးမှာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ မည်မျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိ မရှိ၊ တာဝန်ယူမှု ရှိ မရှိ ဆိုသည့် အပေါ်တွင် များစွာ မူတည် နေပါသည်။
ယခု အမေရိကန်အစိုးရက သူ့စည်းသူလုံစေရန် တာဝန်ယူပြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို ထောက်ခံရေး ရှေ့ခြေတလှမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရကလည်း ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူသင့်ပြီ ဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို အမြန်ဆုံး ဦးမော့လာစေရန် စေတနာ အမှန်ရှိသည် ဆိုပါက အဘက်ဘက်က ဝင်လာမည့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများကို ရယူကာ ကြိုးပမ်းသည်နှင့် တပြိုင်တည်း တိုင်းပြည်၏ အဓိက ဝင်ငွေဖြစ်သော မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတ များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်မျှ အရေးတယူ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကြောင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိကြောင်း မြန်မာအစိုးရ သာမက ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကပါ ပြသရမည့်အချိန် ရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ကြိုးတန်းပေါ်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် အတွက် အမှောင်နေ့များ
အနောက် နိုင်ငံများနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Punisher July 14, 2012 - 1:35 am	နိူ်င်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလက်ရှိအနေအထားမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာပါ ။ အရေးကြီးတာက “တယုတ်” တွေလို ဘယ်သူသေသေ ငါတို့အမြတ်ထွက်ရင်ပြီးတာပဲ ဆိုတဲ့ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့သဘောထားမျိုးမရှိဖို့ပါပဲ ။
Reply	phoneshintan July 25, 2012 - 12:54 pm	First, We need the law and dutifully. Example In Kachin State, Nobody control their cutting the trees many part who are merchant ,nobody known, some securities and authority demand the money and money , At the Panwah Sub – township area at Kanphant village border gate, that Chinese police occupied , They bring the some mineral ( mine ) what kind of mine , No body know , only money and money at the Myanmar border gate. I have evident photo and video .